Gerard Pique oo ka hadlay fikirkiisa kaga aadan dib ugu soo laabashada Neymar ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 29 Nof 2018. Gerard Pique ayaa wuxuu sheegay sida ay u adg tahay in xiligan uu dib ugu soo laabto markale laacibka Paris St Germain ee Neymar Jr kooxdiisii hore ee Barcelona.
26 jirka reer Brazil ayaa xiliyadii lasoo dhaafay lala xiriirinayay in markale uu dib ugu soo laabanayo kooxda Barcelona, kadib markii uu kaga dhaqaaqay sanadii 2017 Paris St Germain aduun dhan € 222 million.
Laakiin wareysi uu dhawaan Gerard Pique ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu kaga hadlay wararka ku aadan in Neymar Jr uu markale dib ugu soo laabanayo garoonka Cump Nou.
“Waxaan la leenahay xiriir aad u wanaagsan Neymar Jr, waxaan kala jeedaa dhamaan ciyaartoyda kooxda Barcelona, qof walbana wuu ogyahay”.
“Neymar way adag tahay sida uu markale dib ugu soo laaban lahaa kooxda Barcelona, ma ahan wax sahlan in ay sidaas dhacdo, haatan qof walba wuxuu diirada saari doonaa sida uu xili ciyaareedkan ugu guuleysan lahaa koobab, ka dibna waan arki doonaa waxa dhaca”.
“Neymar waa ciyaaryahan cajiib ah oo aan shaki ku jirin, lakiin haatan wuxuu ku sugan yahay kooxda Paris Saint-Germain, waa ciyaaryahanka go’aansaday inuu ka tago Barcelona, anagana waxaan ixtiraameynaa go’aankiisa”.